Sariitatra serba maneho ny lalao pôlitika ambadiky ny vaksinin’ny COVID-19 avy any Shina sy/na Rosia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Oktobra 2020 2:30 GMT
Takelaka notsongaina avy amin'ilay sariitatra nataon'i Miloš Dragojević (Stripom Protiv Diktature), ahitàna ny filoha serba Aleksandar Vučić, fampiasàna nahazoana alàlana.
(Soratra etsy amin'ny sary: Nanafatra vaksiny avy amina firtenena iray isika, saingy tsy holazaiko hoe iza izay firenena izay)
Nampiasain'ilay mpanao sariitatra ,Miloš Dragojević, ny pejy Facebook Stripom protiv Diktature (Sariitatra manohitra ny jadona) mba hanaovana fanehoankevitra mahatsikaiky momba ny toedraharaha pôlitika ao Serbia. Marobe amin'ireo sariitatra farany nataony no miresaka ny tsy fisian'ny mangarahara amin'ny asan'ny governemanta momba ny loharanon'ireo vaksiny iadiana amin'ny COVID-19 sy ny fanehoankevitry ny vahoaka.
Tao anaty fanambaràna iray nomeny ny Global Voices, nohazavainy ny antony nanombohany namokatra ireny sariitatra nomerika ireny:
Nanomboka ny asa fanaovana sariitatra ho an'ny pejy Sariitatra manohitra ny Jadona aho satria te-haneho ny fitroarako sy ny tsy fanekeko ny toedraharaha misy ato amin'ny fireneko. Miara-dàlana amin'izay ihany, tiako mba ho betsaka ny olona afaka mahita izay fomba fanehoana izay. Hitako fa ny sariitatra mahatsikaiky dia fomba iray mahomby entina hanesoana sy hanehoana ireo fivoarana ratsy eo anatin'ny fiarahamonina, indrindra fa izay nataon-dry zareo pôlitisiàna.
Raha tamin'ny voalohany, nataon'ny governemanta serba tarihan'ny filoha Aleksandar Vučić ambanin-javatra ny loza aterak'ilay valanaretina, taorian'ireo fifidianana tamin'ny Jona, nisy fiovàna ny fomba firesaka ary dia toerana toy ny hoe mpiaro vahoaka tsy ho voan'ny COVID-19 no noraisin'ny filoha. Ny 15 Jolay, nambaran'i Vučić fa mifandray aminà firenena iray efa nahavita vaksiny izy ary ho vonona azo raisina ao Serbia izany alohan'ny faran'ny taona 2020.
Rehefa nanontany ny anaran'ny firenena mety ho nanafarana ilay vaksiny ireo mpanao gazety, nolavin'i Vučić ny hanome izay vaovao izay. Nolazainy fotsiny fa “tsy ho ela dia hataontsika ny sonia savaranonando amin'ny fifanarahana, saingy tsy azoko lazaina anareo ny anaran'ilay firenena.”
Kanefa, herinandro roa taty aoriana, nambaran'ny filoha serba fa nihaona izy sy ny masoivohon'ny firenena shinoa, Chen Bo, ary “naveriny indray ny fanakasitrahany noho ny fanohanana azon'i Serbia avy amin'i Shina sy ny filoha Xi Jinping, indrindra fa noho ireo fanampiana voaray nandritra ny fisian'ny valanaretina coronavirus,” tamin'ny fanamarihana fa ny fahazoana vaksiny dia iray tamin'ireo lohahevitra tao anatin'ilay fihaonana.
Koa satria volana maromaro, na mety ho taona mihitsy no ilaina amin'ny andrana klinika mba hanandramana tsara araka ny tokony ho izy ilay vaksiny, ampahany betsaka amin'ny vahoaka no tsy matoky ny kalitaon'ny vokatra fanafody tahàka izany. Hita taratra ao anatin'ity sariitatra manaraka ity io fisalasalàna io, manasongadina ny lazaina fa fanambaràna nataon'i Vučić sy Xi.
Sariitatra momba ny lazaina fa fampiasàna ao Serbia ireo vaksiny shinoa iadiana amin'ny VOCDI-19 , sary an'i Miloš Dragojević (Stripom Protiv Diktature), fampiasàna nahazoana alàlana.
(sary faharoa: Ho ataonay andrana amin'ireo olompirenena amina firenena iray ilay vaksiny. Fa tsy holazaiko hoe iza ilay firenena)
Ny 11 Aogositra, nanambara i Rosia fa nahavokatra vaksiny hiadiana amin'ny COVID-19. Nanomboka nidera io fivoarana miteraka resabe io ireo media mpomba an'i Rosia, ireo pôlitisiàna sy mpampiasa media sôsialy any Balkàna, indrindra indrindra, tamin'ny famerenana ilay filazàna hoe ny zanakavavin'i Poutine no efa nitsindrona ilay vaksiny.
Tamin'io andro io ihany ny filoha serba dia naneho hevitra momba ilay vaovao mikasika ny vaksiny vitan'i Rosia, niaraka tamin'ny fanambaràna iray hoe “vonona izy ny ho voalohany hitsindrona ilay vaksiny Rosiàna”,araka ny nitateran'ny Russia Today azy tao amin'ny Twitter.
Ireo hatsikana an-tsary eto ambany, tamin'ny 14 Aogositra, dia mampiseho ny fiovam-pijerin'ireo zokiolona, izay heverina ho faran'izay mora resy lahatra amin'ny fomba fisainan'ny Rosiàna sy ny an'ireo olompirenena mpandrendrika vahoaka izay miray petsepetsa amin'i Rosia.
Kisary hatsikana ahitàna zokiolona roa efa misotro ronono miresaka momba ny vaksinin'ny COVDI-19, avy amin'i Miloš Dragojević (Stripom Protiv Diktature), fampiasàna nahazoana alàlana.
Soratra etsy amin'ireo sary 1:
A= Ratsy ireny vaksiny hiadiana amin'ny coronavirus ireny. Tadiavin'ny Amerikàna sy ireo glôbalista hopotehana amin'ny alalan'izy ireny isika.
B= Mbola tsy renao angaha? Namorona vaksiny ry zareo Rosiàna.
B= Efa notsindronina ny zanakavavin'i Poutine.
A= Izany anie no efa nolazaiko anao foana hatrizay e! Hoe ny vaksiny ihany no fomba tokana hahavonjy antsika. Raha vao tonga eto ireny dia izaho no ho voalohany hahazo azy
Raha nameno ny media sôsialy ireo sary mahatsikaiky miresaka an'i Poutine, misy vondrona iray kosa avy ao Balkàna nijanona ho tsy nandrenesam-peo, tsy araka ny nahazatra — ireo anti-vaxxers (ireo mpanohitra ny vaxxiny). Naneho hevitra momba izay endri-javatra izay tao amin'ny Twitter i Sloboda Jakoski, mpitari-kevitra ao amin'ny media sôsialy makedôniàna.
Ekeko fa tao anatin'ny hafaliana ny sasany tamin'ireo olom-pantattro “anti-vaxxer”, raha ny marina, dia anti-Western (mpankahàla tandrefana) fotsiny nandritra izay fotoana izay. Misaotra anao ry Rosia!
Tamin'ny May 2020, nanambara ny governemanta Serba fa ireo olondehibe rehetra ao amin'ny firenena dia afaka hahazo fanampiana tokana tsy miverina 100 Euros (120 dolara amerikàna eo ho eo) avy amin'ny governemanta. Nanamarika ireo pôlitisiàna avy amin'ny fanoherana fa io fitsinjaràna ny volan'ny mpandoa hetra io dia mifanandrify amin'ny fanohizana ny fampielezankevitra ho an'ny fifidianana mialohan'ny fotoana, tokony ho natao tamin'ny 21 Jona.
Miteraka resabe ilay raharaha, misy ireo olomalaza sasany nilaza fa tsy handray ilay vola, tamin'ny filazàna fa efa manana ny ampy ry zareo ka ireo fanampiana ireo dia tokony handeha ho any amin'ireo olona tena mila izany kokoa. Kanefa, araka ireo fanambaràna nataon'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta, nihoatra ny tena isan'ireo olompirenena (6.2 tapitrisa) monina ao Serbia ny isan'ireo olona nisoratra anarana handray ilay 100 euros, izay midika fa na ireo olompireneny mipetraka any ivelany aza dia nisoratra anarana koa.
Ny sariitatra farany nalefan'i Miloš Dragojević dia maneho ny fitsimbadihana nahavalalanina tamin'ny fomba fijerin'ny olompirenena tsotra, niaraka tamin'ilay drafitra fanampiana avy amin'ny fanjakàna homena ireo olona mandray ilay vaksiny.
Fanehoankevitra iray tao amin'ny U-turn momba ilay vaksiny COVID-19 rehefa tafiditra ny resaka vola, avy amin'i Miloš Dragojević (Stripom Protiv Diktature), nahazoana alàlana.
Soratra eo anatin'ny sary 1:
A= Handray ilay vakisy hiadiana amin'y coronavirus ve ‘nareo?
B= Tsy misy fika ry akama an! Poizina izany.
A= Hanome 100 euros ho an'izay mandray an'ilay vaksiny anie,hono, ry zareo e!
B= Hmm, azo atao ve ny mandray im-betsaka an'ilay vaksiny ?
Nandeha lavidavitra kokoa ny fanazavan'i Miloš Dragojević momba ny antony iheverany ny maha-zavadehibe ny fikatrohana ataony amin'ny alàlan'ireo sary mahatsikaiky :
Noho ny antony manokana, manandanja ho ahy ity asa ity satria ilaiko ny olona mba handre ny fomba fijeriko sy ny toerana raisiko. Tsy hoe fotsiny te-hilaza izany mazava aho, fa mampita izany amin'ny fomban'ny ara-panahy sy mivantana, arahana hafatra fohy fa mafonja. Manana filàna manokana ihany koa aho hanentana amin'ny fomba rehetra ny fiarahamonina – handona ny olona sy hanao izay hisaintsainan-dry zareo, ary mba tsy hanarahana ireo teôrian'ny tsikombakomba indrahindrain'ireo media sy ny resaka miampitampita. Ankehitriny, sahiran-tsaina ny olona noho ny fitobahana tafahoatran'ireo torohay samihafa ary mifanohitra. Hita miavaka io rehefa ny vaksiny hiadiana amin'ny coronavirus no resahana. Nezahako ny nampiasa ireo sariitatra ataoko mba hampisehoana hoe tena mora tokoa ny manova fomba fijery sy ny maka toerana mifanaraka amin'izay fitsaratsarampoana ananan-dry zareo, izay vokatry ny filonan-dry zareo isanandro ao anaty fanasàna atidoha tsy mitsahatra. Tiako ihany koa ny hiampanga ny fanodinkodinan-dresaka ataon'ireo pôlitisiàna, ny fanangonana mora foana tombony ara-pôlitika amin'ny alàlan'ity olana goavana be ity izay, ara-etika, tsy tokony ho araraotina amin'izao fomba atao izao.